Shiinaha qalinka cusub ee hyaluron ee alaab-tirtirka duubista iyo Warshadda | Kacay
qalinka hyaluron cusub ee duuduubka duuduubka
Qalinka hyaluron qalinka ayaa ah qaabkeena cusub ee la cusbooneysiiyay, wuxuu leeyahay 5 nooc oo midabbo ah. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu soo saaro laalaabkii, ka saar bacaha isha, ka saarista cagaha toogga iyo cirbadeynta hyaluronic acid. Waxaan qalinka kuugu dari karnaa astaanta shirkadda haddii aad u baahato.
Goobta Asalka: Beijing, Shiinaha
Sumadda: Bilic soo kacday
Habka gaarsiinta: DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS iwm
Shuruudaha lacag bixinta: TT, West Union, Paypal, Gram Money, Amaah bixinta internetka
Midabka: 5 midab oo xulasho ah
Ku dar astaan haa, MOQ waa 50pcs
Xirmo: Sanduuqa kartoonka
Nooca Qalinkii Hyaluronic acid
Muuqaalka ka saar duuduubka, ka saar bacaha isha, ka saarista cagaha tukaha iyo cirbadda hyaluronic
Waxyaabaha 16 ahama (ahama caafimaad aan xirfad lahayn)
Mugga duritaanka: 0.01ml-0.12ml
Habka hawlgalka Otomaatiga cadaadiska sare
Qoto dheer duritaanka 6-8mm
Xanuun la'aan: majiro naqshad cirbadeynta cirbadeynta, iska ilaali taabashada unugyada neerfaha ee subcutaneous, waxay si weyn u yareyn kartaa xanuunka cirbadeynta.
Quruxda Degdegga ah: Qalinkani wuxuu ku buufiyaa hyaluronic acid iyo nafaqooyin kale gunta hoose ee maqaarka buufin lagu buufinayo si loo gaadho saamayn is qurxin dhakhso leh, ha noqoto mid ku habboon guriga ama meelaha lagu qurxiyo qurxinta.
Waxqabadka: Si qoto dheer ayuu u qoyaa una qoyaa maqaarka, taasoo u oggolaanaysa maqaarku inuu si dhakhso leh u buuxiyo, hagaajinta laalaabka iyo maqaarka caajis ah.
Nooca Atomisation: Cadaadiska sare waxaa sameeya aaladda cadaadiska, dareerahana waxaa laga soo saaraa daloolka yar ee ku yaal qeybta kore ee dhamaadka hore si uu u sameeyo khaanad dareere ah oo aad u fiican oo 0.17mm ah, kaas oo isla markiiba dhex gala maqaarka oo gaaro maqaarka .
1. Alaabtaan ma leedahay shahaadada CE?
Haa, alaabtayada dhammaantood waxay leeyihiin shahaadada CE.
2. Waa maxay dammaanadda alaabtaan?
Waa 1 sano oo damaanad ah
3. Imisa jeer ayaa loo baahan yahay si loo helo natiijada ugu fiican?
Caadi ahaan waxay heli kartaa natiijo fiican kadib 1 jeer duritaanka.
4. Miyaan heli karnaa qiimaha wakiilka haddii aan rabno inaan u qaybinno sheygan?
Miyaan ku dari karnaa astaanta shirkadeena badeecadan?
Haddii aad xiisaynayso inaad noo noqoto qaybiyahaaga waddankaaga, fadlan si faahfaahsan ila soo xiriir, waxaan siin karnaa qiimo wanaagsan kuwa wax qaybiya si ay uga taageeraan inay u furaan suuqa dalkooda. Haa, waxaan ku dari karnaa astaanta qeybiyaha badeecadan, sidoo kale waxaan beddeli karnaa midabka sida macaamiisha ay ugu baahan yihiin, laakiin waxay u baahan tahay inay noqoto dalab isdaba-joog ah, MOQ waa 50pcs.
5. Miyaad iibisaa hyaluronic acid ama serum taas oo ah qalinka hyaluron isticmaal
Maya, ma iibinayno badeecooyinka noocaas ah. Fadlan ka iibso badeecadaha la xiriira dukaanka xirfadleyda ah si ammaan ah loo isticmaalo.
Hore: cusub Q biiro ND Yag Laser tattoo saarista
Xiga: Xirfadlaha Microneedling Xirfadlaha Qalabka Daryeelka Maqaarka Korontada wireless
qallooca qaabka hyaluron qalinka 0.3ml 0.5ml
2 in1 Meso duritaanka Gun Hyaluron Pen 0.3ml ...